COVID-19: Coronavirus နှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆမှားများ | Vibhavadi Hospital Myanmar
COVID-19: Coronavirus နှငျ့ ပတျသကျသော အယူအဆမှားမြား
	COVID-19 သညျ ရာသီတုပျကှေးလောကျ ကွောကျစရာ မကောငျးပေ/ မပွငျးထနျပေ
World Health Organization (WHO) အရ ရာသီတုပျကှေးကွောငျ့ နှဈစဉျ လူ ၂ သိနျး ၉ သောငျး မှ ၆ သိနျးခှဲကွား သဆေုံးတိုငျသညျ။ အခြို့နှဈမြားတှငျ ပို၍ သဆေုံးမှုမြားနိုငျသညျ။ ၁၉၁၈ ရာသီတုပျကှေး ကမ်ဘာ့ကပျကွီးတှငျ ကမ်ဘာ့လူဦးရေ၏ တဈဝကျခနျ့ သဆေုံးခဲ့သညျ။ ပညာရှငျမြား၏ မှတျတမျးမြားအရ ရာသီတုပျကှေး၏ သဆေုံးနှုနျးမှာ ၀.၁ % ခနျ့ရှိသညျ။ COVID-19 ၏ သဆေုံးနှုနျးမှာမူ ၂ % ခနျ့ရှိသညျ။ အခြို့ ပညာရှငျမြားက သဆေုံးနှုနျး ၁% ဟု ခနျ့မှနျးသညျ။ သို့သျော COVID-19 သညျ သမေိနျ့ခထြားသော ရောဂါမဟုတျပေ။ ရောဂါကူးစကျခံရသူ၏ ၈၀ % တှငျ ရောဂါလက်ခဏာ မပွငျးထနျပေ။ သို့သျော COVID-19 ၏ ကူးစကျမှုနှုနျးသညျ ၂.၂ (COVID-19 ရှိနသေောလူတဈယောကျသညျ အခွားလူ ၂.၂ ယောကျကို ကူးစကျစနေိုငျသညျ ။ ရာသီတုပျကှေး၏ ကူးစကျမှုနှုနျးမှာ ၁.၃ သာရှိသညျ။
	နှာခေါငျးစညျးက COVID-19 ရောဂါမကူးစကျအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျတယျ
သာမနျလူတဈယောကျ နှာခေါငျးစညျးတပျခွငျးဖွငျ့ ရောဂါ မကူးအောငျ ကာကှယျ၍ မရပါ။ ရောဂါကူးစကျခံထားရသူနှငျ့ ၎င်းငျးကို ပွုစုစောငျ့ရှောကျနသေူမြားကမူ ဝတျဆငျရနျ လိုသညျ။ နှာခေါငျးစညျးတပျခွငျးဖွငျ့ တပျဆငျသူကိုယျတိုငျထကျ ပတျဝနျးကငျြမှ လူမြားဆီသို့ ရောဂါပိုးမှားအမှုံမြား လှငျ့စငျရောကျရှိသှားခွငျးမှ ကာကှယျပေးသညျ။ သို့သျော နှာခေါငျးစညျးသညျ
ရောဂါပိုးမှားအမှုံမြား ပါးစပျနှငျ့နှာခေါငျး အတှငျးသို့ မရောကျအောငျ ကာကှယျ မပေးနိုငျပါ။ နှာခေါငျးစညျးတပျခွငျးကွောငျ့ မကျြနှာကိုကိုငျတှယျမိရနျ အခှငျ့ပိုမြားပွီး ရောဂါကူးစကျမှု အန်တရာယျပိုမြားနိုငျသညျ။
	လကျဆေးခွငျးသညျ ရောဂါကူးစကျခွငျးကို ကာကှယျရနျအတှကျ မထိရောကျပါ
စနဈတကြ သသေခြောခြာ လကျဆေးခွငျးသညျ ရောဂါကူးစကျခွငျးကို ကာကှယျသညျ့ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးတဈခု ဖွဈသညျ။ WHO အဖှဲ့အစညျးမှစက်ကနျ့ ၂၀ ကွာ သသေခြောခြာ လကျဆေးခွငျးဖွငျ့ COVID-19 အပါအဝငျ အခွား ရောဂါပိုးမြားကို ကာကှယျနိုငျသညျဟု အကွံပွုသညျ။
ဆပျပွာ နှငျ့ လကျကို သခြောဆေးပါ။ သနျ့ရှငျးသော တဈခါသုံး တဈရှူး သို့မဟုတျ hand drier နှငျ့ အခွောကျခံပါ။
ရနှေငျ့ဆပျပွာ အလှယျတကူ မရနိုငျလြှငျ hand sanitizer နှငျ့ လကျကို သနျ့စငျပါ။ အယျလျကိုဟျော အနညျးဆုံး ၆၀ % နှငျ့ အထကျ ပါသော hand sanitizer သညျ ရောဂါပိုးမြားကို သစေနေိုငျသညျ။ မကျြနှာ ပါးစပျ နှာခေါငျးနှငျ့ မကျြလုံးတို့ကို ကိုကျမညျ့အခါတိုငျး hand sanitizer နှငျ့ လကျကို သနျ့စငျပါ။ အမြားအားဖွငျ့ ကိုငျတှယျရသော တံခါးလကျကိုငျ လှကေားလကျရမျး စားပှဲမကျြနျှာပွငျတို့ကို သခြောသနျ့စငျပါ။
	COVID-19 ကိုထိနျးခြုပျရနျ နညျးလမျးမရှိပါ
လိုအပျပါက အစိုးရ အဖှဲ့အစညျးမြားက ကူးစကျမှုကို ထိနျးခြုပျရနျ လူမြားလိုကျနာရမညျ့ အောကျပါ နညျးလမျးမြားကို ခမြှတျလရှေိ့သညျ ။
ရောဂါကူးစကျခံရသူကို အမြားနှငျ့ မရောဘဲ သီးသနျ့ထားခွငျး
??? ဘယျလိုလူတှကေ အမြားနှငျ့ မရောဘဲ သီးသနျ့ ထားဖို့ /နဖေို့လိုမလဲ
COVID-19 ရှိမရှိ ဓာတျခှဲစဈဆေးထားသော အဖွစေောငျ့နသေူမြား
လှနျခဲ့သော ၁၄ ရကျအတှငျး သတျမှတျထားသော နရောမြား (taly (outside specific areas in Northern Italy) before 9thMarch , Mainland China outside of Hubei Province, South Korea outside of Daegu, Cheongdo and Gyeongsan, Cambodia, Hong Kong, Japan, Laos, Macau, Malaysia, Singapore) မှ ပွနျလာသူမြား (ရောဂါလက်ခဏာ ရှိသညျဖွဈစေ မရှိသညျဖွဈစေ)
??? အမြားနှငျ့ မရောဘဲ အိမျတှငျ သီးသနျ့နခေိုငျးလြှငျ လိုကျနာရမညျ့ အခကျြမြား
	အလုပျ ၊ ကြောငျး, လူအမြားသှားသော နရောမြားသို့ မသှားရ။
	အမြားသုံး ပို့ဆောငျရေး (ဘတျဈကား ၊ ရထား ၊ တကျစီ) မစီးရ
	အိမျသို့ ဧညျ့သညျ မလာခိုငျးရ
	ကလေးအကွိုအပို့ လုပျရနျ နှငျ့ အခွားအလုပျမြားကို မိမိကိုယျစား အခွားမိသားစုဝငျမြား မိတျဆှမြေားကို လုပျခိုငျးပါ။
	delivery services မှတဆငျ့ ဆေးနှငျ့ အစားအသောကျမြား ဝယျပါ ။ လာပို့သောအခါ မိမိလကျထဲသို့ မထညျ့စဘေဲ တံခါးဝ၌ ထားခဲ့ခိုငျးပါ။
	မိမိတှငျ COVID-19 မကူးစကျနိုငျပါ
ကာကှယျသော နညျးလမျးမြားကို မလိုကျနာပါက မညျသူမဆို ကူးစကျနိုငျသော အလားအလာရှိသညျ။ အခြို့သူမြား (အသကျအရှယျကွီးသူမြား
ဆီးခြို ၊ သှေးတိုး ၊ နှလုံးရောဂါ၊ အသကျရှူလမျးကွောငျးရောဂါ၊ ကငျဆာရောဂါ နှငျ့ အခွား နာတာရှညျ ရောဂါရှိနသေူမြား) တှငျ ရောဂါလက်ခဏာ ပိုမိုပွငျးထနျပွီး အသကျအန်တရာယျ ထိခိုကျနိုငျသညျ။
စဈတမျးမြားအရ အမြိုးသားမြားသညျ အမြိုးသမီးမြားထကျ သဆေုံးနှုနျး ပိုမွငျ့သညျ (အမြိုးသား သဆေုံးနှုနျး ၂.၈% ဖွဈပွီး အမြိုးသမီး သဆေုံးနှုနျး ၁.ရ% ရှိသညျ)
	အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျမြားမှ COVID-19 ကူးစကျနိုငျသညျ
WHO အရ အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျမြားမှ COVID-19 ကူးစကျနိုငျသော သကျသေ အထောကျအထား မရှိသေးပါ
	COVID-19 သည် ရာသီတုပ်ကွေးလောက် ကြောက်စရာ မကောင်းပေ/ မပြင်းထန်ပေ
World Health Organization (WHO) အရ ရာသီတုပ်ကွေးကြောင့် နှစ်စဉ် လူ ၂ သိန်း ၉ သောင်း မှ ၆ သိန်းခွဲကြား သေဆုံးတိုင်သည်။ အချို့နှစ်များတွင် ပို၍ သေဆုံးမှုများနိုင်သည်။ ၁၉၁၈ ရာသီတုပ်ကွေး ကမ္ဘာ့ကပ်ကြီးတွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ တစ်ဝက်ခန့် သေဆုံးခဲ့သည်။ ပညာရှင်များ၏ မှတ်တမ်းများအရ ရာသီတုပ်ကွေး၏ သေဆုံးနှုန်းမှာ ၀.၁ % ခန့်ရှိသည်။ COVID-19 ၏ သေဆုံးနှုန်းမှာမူ ၂ % ခန့်ရှိသည်။ အချို့ ပညာရှင်များက သေဆုံးနှုန်း ၁% ဟု ခန့်မှန်းသည်။ သို့သော် COVID-19 သည် သေမိန့်ချထားသော ရောဂါမဟုတ်ပေ။ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ၏ ၈၀ % တွင် ရောဂါလက္ခဏာ မပြင်းထန်ပေ။ သို့သော် COVID-19 ၏ ကူးစက်မှုနှုန်းသည် ၂.၂ (COVID-19 ရှိနေသောလူတစ်ယောက်သည် အခြားလူ ၂.၂ ယောက်ကို ကူးစက်စေနိုင်သည် ။ ရာသီတုပ်ကွေး၏ ကူးစက်မှုနှုန်းမှာ ၁.၃ သာရှိသည်။
	နှာခေါင်းစည်းက COVID-19 ရောဂါမကူးစက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်
သာမန်လူတစ်ယောက် နှာခေါင်းစည်းတပ်ခြင်းဖြင့် ရောဂါ မကူးအောင် ကာကွယ်၍ မရပါ။ ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူနှင့် ၎င်းကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေသူများကမူ ဝတ်ဆင်ရန် လိုသည်။ နှာခေါင်းစည်းတပ်ခြင်းဖြင့် တပ်ဆင်သူကိုယ်တိုင်ထက် ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများဆီသို့ ရောဂါပိုးမွှားအမှုံများ လွင့်စင်ရောက်ရှိသွားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ သို့သော် နှာခေါင်းစည်းသည်
ရောဂါပိုးမွှားအမှုံများ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်း အတွင်းသို့ မရောက်အောင် ကာကွယ် မပေးနိုင်ပါ။ နှာခေါင်းစည်းတပ်ခြင်းကြောင့် မျက်နှာကိုကိုင်တွယ်မိရန် အခွင့်ပိုများပြီး ရောဂါကူးစက်မှု အန္တရာယ်ပိုများနိုင်သည်။
	လက်ဆေးခြင်းသည် ရောဂါကူးစက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မထိရောက်ပါ
စနစ်တကျ သေသေချာချာ လက်ဆေးခြင်းသည် ရောဂါကူးစက်ခြင်းကို ကာကွယ်သည့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ WHO အဖွဲ့အစည်းမှစက္ကန့် ၂၀ ကြာ သေသေချာချာ လက်ဆေးခြင်းဖြင့် COVID-19 အပါအဝင် အခြား ရောဂါပိုးများကို ကာကွယ်နိုင်သည်ဟု အကြံပြုသည်။
ဆပ်ပြာ နှင့် လက်ကို သေချာဆေးပါ။ သန့်ရှင်းသော တစ်ခါသုံး တစ်ရှူး သို့မဟုတ် hand drier နှင့် အခြောက်ခံပါ။
ရေနှင့်ဆပ်ပြာ အလွယ်တကူ မရနိုင်လျှင် hand sanitizer နှင့် လက်ကို သန့်စင်ပါ။ အယ်လ်ကိုဟော် အနည်းဆုံး ၆၀ % နှင့် အထက် ပါသော hand sanitizer သည် ရောဂါပိုးများကို သေစေနိုင်သည်။ မျက်နှာ ပါးစပ် နှာခေါင်းနှင့် မျက်လုံးတို့ကို ကိုက်မည့်အခါတိုင်း hand sanitizer နှင့် လက်ကို သန့်စင်ပါ။ အများအားဖြင့် ကိုင်တွယ်ရသော တံခါးလက်ကိုင် လှေကားလက်ရမ်း စားပွဲမျက်နှာ်ပြင်တို့ကို သေချာသန့်စင်ပါ။
	COVID-19 ကိုထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်းမရှိပါ
လိုအပ်ပါက အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများက ကူးစက်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် လူများလိုက်နာရမည့် အောက်ပါ နည်းလမ်းများကို ချမှတ်လေ့ရှိသည် ။
ရောဂါကူးစက်ခံရသူကို အများနှင့် မရောဘဲ သီးသန့်ထားခြင်း
??? ဘယ်လိုလူတွေက အများနှင့် မရောဘဲ သီးသန့် ထားဖို့ /နေဖို့လိုမလဲ
COVID-19 ရှိမရှိ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးထားသော အဖြေစောင့်နေသူများ
လွန်ခဲ့သော ၁၄ ရက်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသော နေရာများ (taly (outside specific areas in Northern Italy) before 9thMarch , Mainland China outside of Hubei Province, South Korea outside of Daegu, Cheongdo and Gyeongsan, Cambodia, Hong Kong, Japan, Laos, Macau, Malaysia, Singapore) မှ ပြန်လာသူများ (ရောဂါလက္ခဏာ ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ)
??? အများနှင့် မရောဘဲ အိမ်တွင် သီးသန့်နေခိုင်းလျှင် လိုက်နာရမည့် အချက်များ
	အလုပ် ၊ ကျောင်း, လူအများသွားသော နေရာများသို့ မသွားရ။
	အများသုံး ပို့ဆောင်ရေး (ဘတ်စ်ကား ၊ ရထား ၊ တက်စီ) မစီးရ
	အိမ်သို့ ဧည့်သည် မလာခိုင်းရ
	ကလေးအကြိုအပို့ လုပ်ရန် နှင့် အခြားအလုပ်များကို မိမိကိုယ်စား အခြားမိသားစုဝင်များ မိတ်ဆွေများကို လုပ်ခိုင်းပါ။
	delivery services မှတဆင့် ဆေးနှင့် အစားအသောက်များ ဝယ်ပါ ။ လာပို့သောအခါ မိမိလက်ထဲသို့ မထည့်စေဘဲ တံခါးဝ၌ ထားခဲ့ခိုင်းပါ။
	မိမိတွင် COVID-19 မကူးစက်နိုင်ပါ
ကာကွယ်သော နည်းလမ်းများကို မလိုက်နာပါက မည်သူမဆို ကူးစက်နိုင်သော အလားအလာရှိသည်။ အချို့သူများ (အသက်အရွယ်ကြီးသူများ
ဆီးချို ၊ သွေးတိုး ၊ နှလုံးရောဂါ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ နှင့် အခြား နာတာရှည် ရောဂါရှိနေသူများ) တွင် ရောဂါလက္ခဏာ ပိုမိုပြင်းထန်ပြီး အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်နိုင်သည်။
စစ်တမ်းများအရ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သေဆုံးနှုန်း ပိုမြင့်သည် (အမျိုးသား သေဆုံးနှုန်း ၂.၈% ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး သေဆုံးနှုန်း ၁.ရ% ရှိသည်)
	အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှ COVID-19 ကူးစက်နိုင်သည်
WHO အရ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှ COVID-19 ကူးစက်နိုင်သော သက်သေ အထောက်အထား မရှိသေးပါ